बुद्ध कस्ता व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्छ ? – Maitri News
बुद्ध कस्ता व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्छ ?
बुद्ध भन्नुहुन्छ, कोही व्यक्ति जन्मले ब्राह्मण हुँदैन, कोही व्यक्ति जन्मले नीच पनि हुँदैन, उसको कर्मले नै उसलाई उच्च बनाउँछ र उसको कर्मले नै उसलाई नीच स्थानमा पुर्याउँछ । जसको पार अपार भन्ने हुँदैन, जो भय रहित भई अनाशक्त छ , त्यस्तो व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु ।
हाम्रो समाजमा हामी ब्राह्मण,क्षेत्री, वैष्य, सुद्र भनी विभाजन गरिएको छ । तर त्यो कामका हिसावले मात्र हो । कसैलाई उच्च र नीच देखाउँन होइन् । यदि कसैले उच्च कुलमा जन्मिएर नीच काम गर्छ भने त्यो भन्दा तुच्छ व्यक्ति अरु कोही हुँदैन । त्यसैले कर्मलाई महत्व दिई कर्म अनुसार उच्च व्यक्ति बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । उहाँ पुनः भन्नुहुन्छ, जसले पाप कर्म पखालिसकेको छ, उसलाई ब्राह्मण भनिन्छ , जसको आचरण राम्रो छ उसलाई श्रमण भनिन्छ र मनको मैल फालिसकेका व्यक्तिलाई प्रवजित भनिन्छ ।
बुद्ध भन्नुहुन्छ, शरिर, वचन र मनरुपी तीनै द्धारबाट पाप कर्म नगर्ने र यी तीन वटैमा संयम भएका व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु । जटाधारी भएर, पहेलो बस्त्र लगाउँदैमा कोही ब्राह्मण हुँदैन, मनभित्र कसर राखी बाहिर मात्र सफा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सवै बन्धनबाट मुक्त, त्राशरहित भई राग आदि आशक्तिबाट मुक्त व्यक्ति नै ब्राह्मण कहलाइन्छ ।
त्यस्तै क्रोध, तृष्णारुपी डोरी, विभिन्न प्रकारका मिथ्यादृष्टिसहित अनुसयलाई तोडेर अविद्यालाई निरोध गरी बोध प्राप्त व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्दछन् । जसले अरुको गाली गलौजलाई पनि अविचलित भई सहन गर्न सक्दछ त्यस्ता व्यक्ति नै ब्राह्मण हुन्छन् । कमलको पाटमा पानीको थोपाझ्mै , सियाको टुप्पोको रायोको गेडाझ्mैं, कामभोगमा लिप्त नहुने व्यक्तिलाई बुद्धले ब्राह्मणको संज्ञा दिनुभएको छ ।
जसले यसै लोकमा दुखको क्षय अनुभव गदर्छ, जसले पञ्चस्खण्धरुपी भारी बिसाइसकेको छ , जसको मनमा आशक्ति छैन, त्यस्तो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाइन्छ ।
गम्भीर प्रज्ञासहितका कुमार्ग र सुमार्गको भेद गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बुद्धले ब्राह्मण भन्नुभएको छ । विरोधीहरुको बीचमा बसी विरोध नगर्ने, आशक्तहरुको बीचमा बसी अनाशक्त हुने व्यक्ति ब्राह्मण हुन्छन् । जसले कसैलाई पीडा दिने काम गर्दैन, जसले बोली कडा हुँदैन त्यस्तो व्यक्ति ब्राह्मणको पंक्तिमा गनिन्छ ।
Previous Previous post: पारिवारिक विवादका कारण सामूहिक हत्या भएको आशंका
Next Next post: नापी टोली सगरमाथा शिखरमा